Self-nyagide faiba glaasi ntupu / faiba glaasi ntupu maka GRC na EPS nlereanya - China QuanJiang New ihe
Self-nyagide faiba glaasi ntupu na-kpara site C-iko faiba glaasi yarn, na ntekwasa na alkali eguzogide mkpuchi na onwe-nrapado gluu. Ọ e mere maka mgbagwoju anya nlereanya, eg roofing GRC na EPS nlereanya, wdg
QUANJIANG bụ otu n'ime ndị na-eduga na-emepụta na suppliers nke onye nke ụwa ma ama ụdị onwe-nrapado faiba glaasi ntupu na China, welcome ịzụta ma ọ bụ na n'ùkwù ahaziri onwe-nrapado faiba glaasi ntupu mere na China na-esi na ya free sample anyị factory.
Ntupu size: 4x4mm, 4x5mm, 5x5mm, wdg
Arọ: 90g / m2, 110g / m2, 125g / m2, 145g / m2,152g / m2,160g / m2, wdg
Obosara: 38inch, 1M, 1.2M, wdg
Nnọọ softness na nnọọ nnyapade onwe-nrapado faiba glaasi ntupu:
Mgbe iji anyị ngwaahịa, ọ ga-adịghị mfe ntopute ma ọ bụ ihe nyagide ọdịda 72hours.
Onye ọ bụla mpịakọta plastic akpa ma ọ bụ kwes Ada Ada na labelụ 2 inch akwụkwọ tube.
Na katọn igbe ma ọ bụ pallet.
B.The onwe-nrapado faiba glaasi ntupu nwere àgwà ọma nke nyagide na ọ nwere ike na-ogologo oge, n'otu oge ahụ ntupu dị mfe unroll, ọ bụ n'ihi anyị nyagide gluu akpan akpan na nke zuru okè.
Iji maka mgbagwoju anya nlereanya, eg roofing GRC na EPS nlereanya, wdg
Previous: Self-nyagide faiba glaasi ntupu Mezie
Osote: Flexible Metal Corner Drywall Joint Tape
Self-nyagide faiba glaasi ntupu / faiba glaasi ntupu ...